Crowdfounding: Inotsigira iyo kugadzirwa kweManyowani eInternet Stores Loogic 2014 | ECommerce nhau
Crowdfounding: Inotsigira iyo kugadzirwa kweManyowani eInternet Stores Loogic 2014
Eva maria Rodriguez | | eCommerce, ECommerce kudzidziswa, Zvidzidzo uye zviwanikwa
Vanhu ve Loogic yakatanga mushandirapamwe we kuungana yekugadzirisa yakakwana Chinyorwa cheZvitoro zvepamhepo. Panguva yekukura kwe eCommerce, Iri bhuku rinoshuvira kuve iro rakazara kwazvo gadziriso rakagadzirwa kusvika zvino umo mapoinzi ese anodikanwa kutanga chitoro chakabudirira chakafukidzwa
Pasina mubvunzo, bhuku rino rinenge riri chishandiso chakakosha kuita chirongwa che electronic commerce. Zvishandiso zvakawandisa zviripo zvekugadzira zvitoro zvepamhepo pamwe neruzivo pachinhu ichi, ruzivo rwusiri nyore kusefa nekuongorora nguva dzose. Tevere tinokuudza zvaunowana zvakanyanya mubhuku rino, ndiani anoona zvirimo uye, zvinonyanya kukosha, mashandiro aungaita mumushandirapamwe uyu (kubva kungori € 7).
1 Zviri mukati
3 Kuwanda kwevanhu
El Chinyorwa cheInternet Stores Loogic 2014 yakagadzirirwa zvakanyanya kune vanhu vanoitirwa vhura dare rekutsvaga sevaya vanotova nemumwe arikushanda asi vasati vanyatsojeka nezve zvekuita kuti vabudirire. Izvo zvirimo izvo bhuku rinogadzira zvinobatsira kwazvo mune zvese zviitiko. Izvi zvirimo zvinotevera:
# 1 - Mhando dze e-commerce zvinoenderana nechinangwa chako
Chitsauko chekutanga chinobata nesarudzo mbiri dzeCommerce: 100% zvitoro zvepamhepo nezvitoro zvinoshandisa iyo e-commerce seimwe yekuwedzera nzira yekutengesa.
# 2 - Rudzi rwee-commerce zvinoenderana nemhando yekutengesa
Chitsauko chechipiri chinogadzira mhando dzakasiyana dzeCommerce kuti unzwisise kuti ndeapi sarudzo dzakasiyana dzinogona kutorwa, dzinova shoma. Saka chitsauko ichi chinobata nezvinotevera:
Mabhokisi kana mabhokisi ekunyorera
Chigadzirwa chimwe chete
Chengetedza zviyero uye dockshipping
White chitoro zvitoro
# 3 - Mafungiro mue-commerce
ECommerce zvakare ine yayo jargon. Kuziva zvinorehwa neshoko rega rega kunoreva zvinoreva kugona kusvika pari zvino uye kunyatsonzwisisa zvese zvinobatanidzwa mukuvandudza nekuchengetedza kwechitoro chepamhepo. Kana iwe uchitova nechitoro chepamhepo uye iwe usinganzwisise chero eaya mazano, iwe unofanirwa kuzvivandudza iwe. Pfungwa dzakagadziridzwa ndedzinotevera:
Kutumira mutengo: volumetric uremu
CAC: mutengo wekutenga vatengi
Mutengi hupenyu hwese
Mutengi anodzokorora mwero
# 4 - Nzira dzekubhadhara
Pasina mubvunzo, chakakosha chikamu chekubudirira kweCommerce ndiwo mafomu ekubhadhara. Ichi chitsauko chinotaura nezve dzinotevera nzira dzekubhadhara:
# 5 - Mutengo manejimendi
Kugadzirisa mitengo mushe kwakakosha kuti purofiti yeCommerce, nekuti haisi yekungodhura chete. Maitiro mazhinji anofanirwa kutariswa kuitira kuti mutengo usanyanya kuve muvengi wedu. Kugadzira uyu musoro, chitsauko ichi chinotaura nezve anotevera mapoinzi:
Zvikwereti, zvikwereti uye kukwidziridzwa kwakawanda
Discount coupons uye promotional coupon
# 6 - Pamhepo chitoro manejimendi
Ichi chikamu pane hwakawanda hunyanzvi hwekutarisira eCommerce:
Ajax ngoro dzekutenga
Vatengi vasina kunyoreswa
Yakakurudzirwa uye yakabatana zvigadzirwa
Kuchengetedzwa mukutarisirwa kwedhata kwevatengi
Kutaurirana uye kuvimbika kwevatengi
Pamhepo chitoro kugadzira software
Kubata kune zvitoro zvepamhepo
Mitemo inoshanda kune yemagetsi kutengeserana
Kudzidziswa kwe e-commerce
Maitiro mu e-commerce
Iye munhu anotarisira zvirimo mune iyo Pamhepo Chitoro Chekugadzira Chinyorwa ndiIgnacio de Miguel, mupepeti mudiwa weLoogic.com, rimwe remabhizimusi epamhepo anonyanya kukosha mumutauro wechiSpanish, uye nyanzvi yeCommerce. Pakati pemapurojekiti aanotora chikamu chechitoro chepamhepo cheTierraDeCerveza.com, chaari mubatsiri wekutanga, uye Itandvip.com, maanoshanda semusoro wehunyanzvi hwekutengesa zvemagetsi.
Mushandirapamwe wekuunganidza vanhu watangwa kuburikidza nepuratifomu Tikandei, uye ine bhajeti yakazara ye4000 euros. Vhiki mbiri mushure mekupedzwa, chirongwa ichi chakasimudza zvinopfuura makumi masere muzana ezviuru zvinodiwa kuti urarame. Kana iwe uchida kutora chikamu uye kutsigira chirongwa, iwe unogona kuzviita kubva 7 €.
Kana iwe uri kambani uye uchida kutsigira chikamu kana kuoneka sechitoro chakakurumbira, unogona kuzviita nemipiro kubva ku € 200.
Kutsigira mushandirapamwe wekugadzira iyo Chinyorwa cheInternet Stores Loogic 2014 shanyira iyo projekiti peji pa Lanzanos.com/projects/manual-for-online-stores/. Kwasara mazuva gumi nematanhatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » Crowdfounding: Inotsigira iyo kugadzirwa kweManyowani eInternet Stores Loogic 2014
Eva Maria Rodriguez akadaro
Pachine mazuva gumi asara uye chirongwa ichi chakatokwidza kudarika 10%! Kubudirira kwakazara.
Pindura kuna Eva María Rodríguez
María Domíngez, CEO weOpenley, anotiudza nezve zvaakaona muCommerce chikamu
Usapotsa iyo Retail Forum 2014 inotevera June 11 muMadrid